Jowhar.com : Somali Leader News - News: Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna oo soo dhoweeyay gar gaarka Xukuumada gaarsiineyso degmooyinka
Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna oo soo dhoweeyay gar gaarka Xukuumada gaarsiineyso degmooyinka
Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna ayaa soo dhoweeyay baaqii Xukuumada ee ahaa in gar gaar deg deg ah la gaarsiiyo degmooyinkii laga xoreeyay Al-Shabaab ee gobolada dalka.
Bayaan ka soo baxay Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna ayaa lagu sheegay in deegaanada qaar ay ka jirto xaalado bani'aadanimo, iyagoo ugu baaqay hey'adaha sama falka inay gar gaar deg deg gaarsiiyeen.
Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna ayaa sheegay in loo baahan yahay in gar gaarka bani'aadanimo uu qeyb ka noqdo howl galada dalka looga saarayo Al-Shabaab, maadaama dadka deegaanka aan in muddo ah wax gar gaar sama falin aanay helin.
Bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in Xukuumada ay sugto ammaanka gaadiidka gar gaarka sida, si aan Al-Shabaab u qal qal gelin, waxaana ay ku baaqday in dadka deegaanada ku dhibaateysan si deg deg loo gaarsiiyo.
Culumaa'udiinka ayaa waxaa ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in xilligan loo gurmado meelaha ay dhibaatada xaga bani'aadanimo ka jirto, maadaama deegaanadaas ay in muddo cunaqabateyn ku heysay Al-Shabaab.
Ugu dambeyn Golaha sare Culumaa'udiinka Ahlusuna ayaa soo dhoweeyay deegaanadii u dambeeyay ee Al-Shabaab laga saaray, waxaana ay tilmaameen in shacabka iyo ciidamada ay iska kaashadaan sugida ammaanka.
0 Comments · 626 Reads
Jowhar.com751,346 unique visits